ဆောင်းရာသီမှာ ဆံသားပျက်စီးတာကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ဖို့ ဘာတွေလိုအပ်သလဲ? | CosmeticMyanmar
Home » Article » ဆောင်းရာသီမှာ ဆံသားပျက်စီးတာကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ဖို့ ဘာတွေလိုအပ်သလဲ?
ဆောင်းရာသီမှာ ဆံသားပျက်စီးတာကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ဖို့ ဘာတွေလိုအပ်သလဲ?
ဆောင်းရာသီကို ရောက်လာပြီလေ။ နွေ ဒါမှမဟုတ် မိုးရာသီနဲ့ မတူတာက အသားအရေနဲ့ ဆံသားတွေ ခြောက်သွေ့လာတာပါ။ အသားအရေခြောက်သွေ့တာကိုတော့ သတိထားမိကြပါတယ်။ Body Lotion ဒါမှမဟုတ် body butter တွေ ရေချိုးပြီးတိုင်း လိမ်းပေးကြပါတယ်။ ပျိုမေတို့ မေ့နေတာက ဆံပင်ပါ။ ဆောင်းရာသီမှာ ဆံပင်တွေလည်း အသားအရေနည်းတူ ခြောက်သွေ့ပါတယ်။ အဆီတွေ ခမ်းခြောက်ပြီး နွေနဲ့ မိုးထက် ဘောက်တွေ ပိုထလာနိုင်ပါတယ်။ ဆံသားနှစ်ခွဖြစ်တာနဲ့ ကြမ်းတမ်းတာတွေ ရင်ဆိုင်နိုင်ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆောင်းရာသီမှာ ဆံသားတွေ ကောင်းနေစေဖို့ နည်းလမ်းကောင်းတွေကို ပြောပြပေးမယ်နော်။
၁။ ခေါင်းလျှော်ရည်နဲ့ ပျော့ဆေး
ဆောင်းရာသီမှာ ခေါင်းလျှော်ရည်နဲ့ ပျော့ဆေးကို ပြောင်းလဲသုံးပေးသင့်ပါတယ်။ အစိုဓါတ်ပါဝင်တဲ့ hydrating ခေါင်းလျှော်နဲ့ ပျော့ဆေးအမျိုးအစားကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ Hydrating ပါမပါ ခေါင်းလျှော်ရည်နဲ့ ပျော့ဆေးဝယ်တဲ့အခါ အညွှန်းကို ဖတ်ပြီး သိနိုင်ပါတယ်။ Hydrating ပါတဲ့ ခေါင်းလျှော်ရည်နဲ့ ပျော့ဆေးတွေဟာဆိုရင် ဆံသားတွေကို နူးညံ့ တောက်ပနေစေပါတယ်။ Hydrating အပြင် အညွှန်းမှာ ဆံပင်အတွက် ဘာအာဟာရဓါတ်တွေပါလဲဆိုတာ စုံစမ်းပေးပါဦးနော်။ ဥပမာ အနေနဲ့ ပြောရရင် ဆံသားကောင်းမွန်စေတဲ့ Oil စတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ပါမပါ သေသေချာချာ ကြည့်ပေးရပါမယ်။
၂။ Hair mask
ဆောင်းရာသီမှာ တိုက်ခတ်တဲ့လေက ဆံသားတွေကို ခြောက်သွေ့စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခေါင်းမလျှော်ခင်မှာ hair mask ကို အသုံးပြုပေးသင့်ပါတယ်။ Hair mask က အစိုဓါတ်တွေကို ပြန်လည်ရရှိအောင် ကူညီပေးပါတယ်။ ဆံသားအတွက်လိုအပ်တဲ့ အဆီတွေ ပြန်လည်ရရှိစေပြီး ပျော့ပျောင်းလာစေပါတယ်။ ဆံသားတွေ ကျိုးပဲ့ပျက်စီးတာကိုလည်း အတွင်းပိုင်းအထိ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ Hair mask အများစုမှာ ဗီတာမင် B2, B6, B7, B8 နဲ့ B9 တို့အပြင် မဂ္ဂနီဆီယမ်နဲ့ ဆယ်လီနီယမ်တို့ ပါဝင်ပါတယ်။
၃။ Hair Oil
ခေါင်းလျှော်ပြီးတဲ့အချိန် ဆံသားမခြောက်တခြောက် ဒါမှမဟုတ် ဆံသားတွေ ခြောက်သွေ့ပြီးတဲ့အခါ လိမ်းပေးရပါတယ်။ နေ့စဉ် ပုံမှန်လိမ်းပေးမယ်ဆိုရင်လည်း ရပါတယ်။ လေထုကြောင့် ဆံသားခြောက်သွေ့တာ ကာကွယ်ပေးပြီး ပျက်စီးဆုံးရှုံးတာတွေ နည်းသွားစေပါတယ်။ မရှိမဖြစ် သုံးပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဆံပင်ပုံသွင်းပစ္စည်းဆိုတာ ကောက်စက်နဲ့ ဖြောင့်စက်တွေကို ပြောတာပါ။ သာမန်အချိန်တွေတောင်မှ ဒီပစ္စည်းတွေက ဆံသားကို ခြောက်သွေ့ပျက်စီးစေပါတယ်။ ဆောင်းရာသီမှာ ပိုပြီး သတိထားပေးရပါမယ်။ အရည်အသွေးကောင်းပြီး စိတ်ချရတဲ့ ပစ္စည်းတွေကိုသာ သုံးစွဲပေးပါနော်။
၅။ Hair Dryer
ဆောင်းရာသီမှာ ခေါင်းလျှော်ပြီးရင် အမြန်ခြောက်သွေ့အောင် Hair Dryer ကို အသုံးပြုကြပါတယ်။ အပူချိန်ကို သေသေချာချာ ချိန်ပေးပါနော်။ စနစ်တကျ အသုံးပြုပေးဖို့ လိုပါတယ်။
ပျိုမေတို့ရေ ဆောင်းရာသီက တခြားရာသီတွေထက် အသားအရေနဲ့ ဆံသားတွေကို ပိုမိုခြောက်သွေ့လာနိုင်တာကြောင့် အခုချိန်ကတည်းကနေ အကာအကွယ်တွေ အဆင်သင့်ပြုလုပ်ထားဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။
ဝက်ခြံတွေကို ညတွင်းချင်းသက်သာစေမယ့် COSRX Acne Pimple Master Patch
နှုတ်ခမ်းတမျိုးတည်း အတွက်သာ မဟုတ်ဘဲ ဘက်စုံအသုံးပြုလို့ရနိုင်မယ့် NIVEA ရဲ့ Lip Balm!!
Tags: Hair CarePRODUCTSWINTER